Iinqwelo-moya zaseYurophu zilungiselela ixesha elinzima lasebusika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Iinqwelo-moya zaseYurophu zilungiselela ixesha elinzima lasebusika
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ngexesha loko ngokwesiko eYurophu, ubhubhane kunokwenzeka ukuba enze iimeko zokusebenza zibe nzima.
Ngengeniso isacinezelwe, iinqwelomoya zinobusika obunzima phambi kwazo.
Izinto ezintsha ezahlukileyo ze-COVID-19 zinokuthi zinciphise ukuthanda kwabahambi ukubhabha.
Iindleko zabasebenzi ziya kunyuka kwaye izigqibo ezinzima zemali kufuneka zenziwe.
Iinqwelo-moya zase-Yuropu zimiselwe ukujongana nobusika obunzima ngenxa yesifo esiqhubekayo kunye nokuzithemba kokuhamba okunokwenzeka kushiyekile. Iindleko eziphantsi ziya kuba yinto ephambili ekuvuseleleni ibango njengoko izithintelo zokuhamba zinokuqhubeka.
Ngengeniso isacinezelwe, iinqwelomoya ziya kuba nobusika obunzima ngaphambili. Ngexesha lokwenziwa kwesiqhelo kwi-offseason in iYurophuUbhubhane kunokwenzeka ukuba enze iimeko zokusebenza zibe nzima.
Nangona ibango beliqala ukubuyela kweli hlobo, ubusika kunokuba libali elahlukileyo. Amatyala e-COVID-19 anokuphakama, kwaye kunokuvela ezinye izinto, ukunciphisa ukuzimisela kwabahambi ukubhabha. Ngoorhulumente abaninzi abaphelisa inkxaso, kubandakanya UK, iindleko zabasebenzi ziya kunyuka ngokuqinisekileyo, kwaye kufuneka kwenziwe izigqibo ezinzima kwezemali. Ibhalansi ethe-ethe kufuneka ibethwe phakathi kokunikezelwa kweendawo ezininzi kunye nokugcina iindleko zokusebenza ziphantsi kolawulo. Iinqwelo-moya kufuneka zibe nimble ukuqinisekisa ukusinda.
Abakhweli banokuqhubeka nokulibazisa izicwangciso zokuhamba kobu busika ngenxa yokungaqiniseki okuphezulu. Nangona ukukhutshwa kwesitofu sokugonya kweYurophu kuqhuba kakuhle, umahluko okwiDelta uyinto exhalabisayo. Ngelinye ilizwe lisokola ukugcina intsholongwane, izithintelo zokuhamba zijongeka ngathi zihlala zikhona. Ukucwangciswa kohambo kuya kuqhubeka nokuba nzima ngakumbi ngenxa yezithintelo ezihlala zikhona ezinje ngemfuno yovavanyo olubi lwe-COVID-19 yokungena kwiindawo ezininzi. Ngapha koko, izithintelo zokuhamba Yeyona yesibini inkulu ukuthintela ukuhamba, kunye ne-55% yabaphenduli kuphando lwamva nje lweshishini echaza esi sizathu sokuphepha ukuhamba. Iindlela zothungelwano kufuneka zigxile kwiindawo ezinomda thintelo Kwaye kufuneka kuthathwe indlela e-agile / ephendulayo.
Ukhuphiswano phakathi kweenqwelomoya e-Yurophu lwalunolunya ngaphambi kwe-COVID kwaye amaxabiso yayiyeyona nto ibalulekileyo kubahambi xa bekhetha inqwelo moya. Ngenxa yokungaqiniseki kwemfuno kobu busika, ukukhuthaza ukubhukisha kuya kuba yinjongo ephambili.
Ukuhlisa amaxabiso okunyusa ibango iya kuba licebo elisetyenzisiweyo kobu busika ukugcwalisa izihlalo. Oku kunokutsala i-57% yabaphenduli baseYurophu abathe bakala ixabiso njengeyona nto ibalulekileyo xa kukhethwa uphawu lwenqwelomoya, ngokokuvota kwakutshanje. Ixabiso liya kubaluleka ekukhuthazeni ukuhamba kwiinqwelomoya zexeshana kunye nexabiso eliphantsi ezinokuba zezona zibalaseleyo kwiinqwelomoya. Ngokuhamba kwabahambi beqhubeka nokusondela ekhaya, uthungelwano olubanzi lwaseYurophu lwezi zithwala kufuneka lusebenzele inzuzo yabo.
Isikhululo seenqwelomoya iTweed-New Haven ukuya eTampa iinqwelomoya ngeAvelo...
Oktobha 21, 2021 kwi-01: 31